Ithegi: ukuthengisa kunye nokuthengisa | Martech Zone
Ithegi: ukuthengisa kunye nentengiso
NgoLwesihlanu, Septemba 11, 2015 NgeCawa, ngoSeptemba 13, 2015 Douglas Karr
Sisebenza kwisindululo ngoku apho ithemba lithe bafuna ukuhamba ngokukhawuleza. Uninzi lwabathengisi luza kudla amathe kunye nethuba lokufumana utyikityo olukhawulezileyo, kodwa ngoku ndiyijonga njengophawu lwesilumkiso. Ukuhamba ngokukhawuleza kukhokelela kulindelo lokufumana isikhokelo ngokukhawuleza. Ngelixa oko kunokwenzeka kunokwenzeka de sihlalutye kakuhle umxhasi, ukhuphiswano, kunye nethuba, asiqinisekanga ukuba sizifumana ngokukhawuleza kangakanani na iziphumo. Ngaba
Lwesine, Matshi 19, 2009 NgoMgqibelo, Oktobha 18, 2014 Douglas Karr
Esi sicatshulwa siye sanamathela kum kwiveki ephelileyo: Injongo yentengiso kukwenza ukuthengisa kungafuneki. Injongo yentengiso kukwazi kunye nokuqonda umthengi kakuhle kangangokuba imveliso okanye inkonzo iyamlingana kwaye iyazithengisa. UPeter Drucker Ngezixhobo ezinciphayo kunye nomthwalo womsebenzi owandayo kumthengisi ophakathi, kunzima ukugcina injongo yemizamo yakho yentengiso ingaphezulu kwengqondo. Yonke imihla sijongana nayo